လူတယောက်ရဲ့ အောင်မြင်တက်ကြွမှုကိုဖြစ်စေတာကတော့ ထိုသူ၏ အမြင်နိုင်တဲ့ စိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ "Only One But Lion" ခြင်္သေ့လိုစိတ်မျိုး တကောင်တည်းပဲ သို့သော်ခွန်အားအပြည့်ပါပဲ၊ ဒါကြောင့် အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်စွမ်းအား၊ လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ (Motivation - စိတ်ဓါတ်ခွန်အား) တွေထဲမှ ကမ္ဘာမှာထင်ရှားတဲ့ Motivation Quotes သာဓကများနှင့် စိတ်ခွန်အားပေး မျှဝေရေးသားလိုက်ပါတယ်။ No one can go back and changeabad beginning. But, anyone can start now and createasuccessful ending - မည်သူမှ ဆိုးရွားသောစတင်မှုနှင့်အတိတ်ဆီကို ပြန်မစတင်နိုင်ပါဘူး၊ သို့သော် လူတိုင်းလက်ရှိအနေအထားမှ တဆင့် အောင်မြင်တဲ့အဆုံးသတ်မှုတွေကိုတော့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Every successful person hasapainful story. Every painful story hasasuccessful ending (Accept the pain and get ready for Success): အောင်မြင်သော လူတိုင်းမှာ နာကျင်စရာကောင်းသော ပုံပြင်တွေရှိတက်စမြဲပါပဲ။ နာကျင်စရာ ကောင်းတဲ့ ပုံပြင်တိုင်းဟာလည်း အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာကျင်မှုတွေကိုပေးဆပ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ လဲယူလိုက်ပါ။ If you miss an opportunity, don’t fill the eyes with tears, it will hide again another better opportunity in front of you: တခုခုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါ သင့်မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့မပြည့်စေပါနဲ့၊ နောက်ထပ်ပိုကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုသာ ထပ်ပေါ်လာရင် သင့်ရဲ့မျက်ရည်တွေက ထိုအခွင့်အရေးတွေကို ကွယ်ပျောက်သွားစေပါလိမ့်မယ်။
Ifaproblem can be solved, no need to worry about it. Ifaproblem can’t be solved still worry on: ပြဿနာကို သင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ထပ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး၊ သို့သော် ထိုပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးသရွေ့ ထပ်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေဦးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပြဿနာရှိနေရင် ယခုဖြေရှင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ “Changing the Face” can change nothing. But, “Facing the Change” can change everything: မျက်နှာလေးပဲ ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်အရာကိုမှ မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး၊ သို့သော် ပြောင်းလဲမှုကို ရင်ဆိုင်လိုက်ခြင်းကသာ အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Mistakes are painful when happened. But, years’ later collection is called “Life Experiences” which lead to success: အမှားဆိုတာ ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ နာကျင်စရာတွေပါပဲ၊ သို့သော် နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအမှားတွေက ဘ၀အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ဖြစ်လာပြီး အောင်မြင်မှုဆီ ဦးတည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Depleted stone become status. So, more pain you get will become more value: ထုဆစ်ပါများတဲ့ ကျောက်တုံးတွေဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ထုဖြစ်လာနိုင်သလို၊ သင့်မှာ နာကျင်မှုများများရှိလေလေ ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာလေလေပါပဲ။ Don’t disappoint if people refuse to help you. They said “NO” because of them “You did it yourself”, thanks to them: လူတွေက သင့်အပေါ်မှာ မကူညီတဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့၊ သူတို့တွေရဲ့ မကူညီမှုကြောင့်သာ ကိုယ်တိုင်အရာအားလုံးကို ပြီးမြောက်စေခဲ့တာပါ။
သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပေးလိုက်ပါ။ Never give-up, the beginning is always the hardest. I may not be there yet, I was closed than yesterday to my Goal: ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့၊ အစဆိုတာဟာ ခက်ခဲ့တဲ့သဘောအမြဲရှိတက်ပါတယ်။ ဤနေရာမှာပဲ သင်အမြဲမရှိနိုင်ပါဘူး မနေ့ကထက်စာလျှင်တော့ အောင်မြင်မှုဆီ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပါပြီ။ ယခုစာစုတွေမှတဆင့် သင့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကို မြင့်တင်ပေးပြီး၊ သင်၏လုပ်ငန်းတွေကိုပိုမိုပြီးမြောက်စေပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျနေခဲ့ချိန်မှာလည်း ဤစာစုတွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို ပြန်လည်ခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်။
Motivation ဖြစ်စေတဲ့ စာစုတွေကို များများသိထားလေလေ ဘ၀အတွက် အောင်မြင်ဖို့ခွန်အားတွေရလေလေပါပဲ။ အောင်မြင်သော သင့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် (Motivation) စာစုများဖြင့် အားပေးရေးသားလျှက်။ ကြိုးစားပါဦးမည်။ http//www.esmemm.com တွင် စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် အမျိုးစုံသော ဆောင်းပါး (၁၀၀) ကျော်အား အခမဲ့ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။